Umboniso OseTel Aviv Ubonisa Indlela Awayephethwe Ngayo AmaNgqina KaYehova Xa Kwakulawula AmaNazi
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Intetho Yezandla yaseItali Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiBelize Kriol IsiBhulu IsiChichewa IsiCibemba IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHebhere IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKorea IsiLingala IsiLithuania IsiMalagasy IsiMyanmar IsiNgesi IsiNorway IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiThai IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTswana IsiTurkish IsiUkrainian IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba
JANUWARI 22, 2018
ETEL AVIV—Ukususela ngoNovemba 26 ukuya kutsho ngoDisemba 2, 2017, abantu abamalunga nabayi-1 700 baya kuzibonela umboniso owawubekwe ngamaNgqina KaYehova kwindawo ekuthiwa yiHatachana. Lo mboniso wawenzelwe ukuba babone indlela amaNgqina KaYehova atshutshiswa ngayo xa kwakulawula amaNazi.
Izinto ezaziboniswa zaziquka ividiyo, iifoto nebhatyi yeyunifomu eyayinxitywa eyenziwa liNgqina elalivalelwe. Ezona foto ziyi-27 zaziboniswa zazizotywe nguJohannes Steyer (ukususela 1908-1998) ibe zazibonisa izinto ezazisenzeka eBuchenwald. UMnumzan’ uSteyer, oliNgqina LikaYehova watshutshiswa ngamaNazi kangangeminyaka eyi-10 ibe wavalelwa eBuchenwald, eMauthausen, eSachsenburg naseSachsenhausen. Ngeminyaka yoo-1970, wagqiba ukuzoba izinto ezazisenzeka ngoxa wayevalelwe entolongweni.
Iindwendwe zibuka ibhatyi yeyunifomu eyayinxitywa eyenziwa liNgqina elalivalelwe.
UProfesa Emeritus Yair Auron
Ethetha ngokubaluleka kokubakho kwale miboniso eTel Aviv, uYair Auron, owayekade engumbhali-mbali noprofesa eOpen University of Israel wathi: “Ndicinga ukuba kubalulekile kakhulu ukuba ulutsha luyibone le miboniso, kuba akukho nto ingako luyaziyo ngamaNgqina KaYehova. Uninzi lwabantu baseIsrael akukho kwanto luyaziyo ngamaNgqina KaYehova nendlela awaphathwa ngayo xa kwakulawula amaNazi.”
UMauro Trapanese, isithethi samaNgqina KaYehova eIsrael uthi: “Sasifuna lo mboniso ungafundisi nje kuphela ngentlungu awayekuyo amaNgqina KaYehova xa kwakulawula amaNazi, kodwa kwanangento eyahlukileyo awayenzayo. Ngokomzekelo, safumanisa ukuba, iindwendwe ezininzi zazingayazi into yokuba, amaNgqina KaYehova ngokungafaniyo namanye amaqela ayenokukhululwa ukuba nje anokuthi ayayeka ukuba ngamaNgqina. Loo nkcazelo nezinye izinto ezibalulekileyo zabangela ukuba lo mboniso wahamba kakuhle.”
UProfesa Gideon Greif
UProfesa Gideon Greif, umbhali-mbali oyazi kakhulu imbali yaseAuschwitz wathi: “AmaNgqina KaYehova ayephakathi kwabantu abahloniphekileyo ababenetyala ngenxa nje yokunamathela kwiinkolelo zawo.
UGqirha Batya Brutin
UGqirha Batya Brutin, umbhali-mbali wemizobo engokubulawa kwabantu ngamaNazi wathi: “Ndicinga ukuba, ukufunda ngoko kwenzeka kumaNgqina KaYehova xa kwakulawula amaNazi kusibonisa indlela esifanele senze ngayo ukuze senze ihlabathi libe bhetele.”
Nangona le miboniso yayenzelwe ukuboniswa nje kube kanye, kwabakho abantu abacela inkcazelo engakumbi ngezinto ezenzeka kumaNgqina KaYehova ababeyile kuloo mboniso.
EIsrael: UMauro Trapanese, +972-54-568-1912
Kwidolophu YaseOstriya Kuhlonitshwa AmaNgqina KaYehova Ayi-31 Awabulawa NgamaNazi
EHungary Kwenziwa Utyhilo-Litye Kukhunjulwa AmaNgqina Awabulawa NgamaNazi